Dambiyada Alshabaab ka galeen shacabka Soomaaliyeed – Radio Muqdisho
Maleeshiyada Alshabaab wali kama daalin daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed, oo ay sanadihii tagay oo dhan ku hayeen hagar daamo nooc kasta leh.
Qaraxyo Ismiidaamin ah, Miinooyin jidadka lagu aaso , toogashooyin gaadmo ah, gowrac arxan la’aaneed iyo gabood fallo kale ayay caan ku tahay kooxdu.
Mid ka mid ah dambiyadaasi arxan la’aaneed ayay kooxdu ka geysatay toddobaadkan bilowgiisii gobolka Shabeellada Hoose, ka dib markii ay dad rayid ah ka afduubatay degmooyinka Aw-dheegle iyo Mubraarak, ayna u dishay si fool xun.
Dadka qaarkood ayay kooxdu gowracday , ka dibna meydadkooda uga tagtay waddada.
Dadmbiyada Alshabaab magaca diinta ugu geysanayaan shacabka iyo waxa ay shareecada Islaamku ka qabto, waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cabdullaahi Axmed Garruun.
Maxkamadda ciidammada oo saraakiil u xirnaa qaraxii SYL dambi waysay
Arday ka kala socotay 11 Jaamacadood oo ka dooday Nidaamka Federaalka “SAWIRRO”
Arday ka kala socotay 11 Jaamacadood oo ka dooday Nidaamka Federaalka "SAWIRRO"